rafozan-doza | Desambra 2010 | 4
Te hiteny ratsy be tampotampoka tato ah
Otran'ny hoe herin'andro feno fahadisoam-panantenana be izany iny herin'andro iny. Satria dia lany tanteraka izany ilay lalampanorenana. Za anefa tena mba maniry mafy dia mafy ny hoe lalam-panorenana mitovitovy @ an'ny britanika no ampiasaintsika. Izany hoe asiana kabinetra an'ny mpanohitra ihany koa. "Governemanta" tsy manana fahefana mpanatanteraka kanefa misy @ fomba offisialy, miandraikitra ny fanakihanana (sy fanomezana soso-kevitra) @ ny fitantanana ataon'ny governemanta tena izy. Lalam-panorenana atao mitovitovy @ an'ny amerikana ihany koa. Hoe tena atao misy dikany sy manan-danja be ny Lohaolona. Izany hoe azon'ny Loholona hametrahana fanotaniana sy bedesina izay olona mitana andraikitra ambony ao @ Governemanta sy Komisiona isan'isany... ary indrindraindrindra hoe mahazo fankatoavana avy any amin'izy ireo vao mahazo mandray an'izay toerana ambony izany. Hialana @ hoe didin'ny filoha ny manendry an'zao olona rehetra izao...
Lany ilay lalam-panorenana hoy aho satria eo @ lafiny ara-pifidianana aloha voalohany indrindra dia tena lany ilay izy. Satria sady lany ny Eny, no mbola nihoatra ny 50% ny tahan'ny isan'ny tonga nifidy. Ra mba latsaka manko io dia mbola afaka niady hevitra hoe ny TSIA sy ny WHATEVER no mitambatra tsy mampalany azy kanefa moa dia samy nandresy daholo ireo. Ny hoe fangalarana sy ny sisa, rehefa tsy nisy profo moa dia naman'ny tsisy ihany izany na dia fantatra ny zava-misy... Eny e, mety hiteny isika hoe mbola mitohy ny krizy fa tsy mbola izao no farany ka aza kivy... kanefa minoa ah marimarina fa tsy hiova io. Tsy noho ny hoe handresy i tgv na ny otran'izany fa ny tena marina tia an'io lalam-panorenana io daholo ireto mpanao politika antsika. Satria aleo tsorina ny marina, tia seza sy apprenti diktatera daholo. Na ny 3 mouvances izany na i Monja na ny HAT sy izay manana ambitions hirotsaka ho prezida rehetra eto @ tsika dia tsy mihevitra ny hoe tena hampandroso izany fa dia ny hanjaka tokana sy maso-mandidy no tena tanjona. Izay no antony hoe tena mana avy any an-danitra hoan'izay ho lasa filoha eo io lalam-panorenana io. Dia izay eee...
Inona moa izany fa dia miandry ny krizy manaraka indray... homba antsika A/tra!!
Tsy izany rehetra izany anefa no tena tiako horesahina eto fa ny hoe: kiiiiiiiiiiiiiiiii tsy lesbian ve ranga i Oprah le tsssssssssssssssss. Tsy hoe noho ny fitiavako manokana ny lesbians akory fa noho ny hoe tena mba nieritreritra ah hoe izy no anisan'ny olona hoe tena tafita eo @ fiainana kay tssssssssssssssss manamarina an'ilay teoriako (mbola holazaiko eto) ihany izany hoe ny vehivavy manana ny mahaizy azy, tafita ara-bola/fianarana/social status, ny ankamaroany dia diso safidy be daholo @ resam-pitiavana...
Dia andeha ary ho faranana @ F. U, hira nalaza be t@ herin-taona hoe fiadiana ny zon'ny lesbians... Fako io...
12/12,2010 Sokajy Rediredy